Tu Maung Nyo – ပြည်သူတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အောင်ပွဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
Tu Maung Nyo – ပြည်သူတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အောင်ပွဲ
တူမောင်ညို ။ ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၂
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က အပြတ်အသတ်အနိုင်ရပါတယ်။
ညစ်ပတ်မှု၊ ကောက်ကျစ်မှုတွေ၊ မသမာမှုတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ အနိုင်ရတာပါ။
ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတွေရဲ့သတ္တိ၊ ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှုရေချိန်မြင့်မားမှုကို ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံ ဖေါ်ပြချက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတွေရဲ့သတ္တိ၊ ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးနိုးကြားရေချိန်ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
“ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ”မှာ NLD ရရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရ အရ မတူပါဘူး။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်အုပ်စုစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) အောက်မှာ ကျင်းပခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အစဉ်တစိုက် စက်ဆုတ်ရွံရှာပြီး ခါးခါးသည်းသည်း ဆန့်ကျင် လျက်ရှိကြတဲ့ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ သန္နိဌာန်ခိုင်မာပြတ်သားနေဆဲပဲဆိုတာကို “ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ” ရလာဒ်တွေက ဆက်လက်သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် ပြည်သူလူထုဟာ သူတို့ရသလောက် “လွတ်လပ်ခွင့်” ကို အသုံးချပြီး သူတို့ဆန္ဒတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖေါ်ထုတ်ပြသလိုက်တဲ့ ဒုတိယအကြိမ်အောင်ပွဲလို့ပြောရမှာပါ။
ယခုလိုအရေအတွက်ပမာဏနဲ့ NLD ကအပြတ်အသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော်မမျှော်လင့်ရဲခဲ့ပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ရာ အရေ အတွက်ဖြင့်သာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တွက်ချက်ယူဆခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဘာကြောင့်ယူဆဖြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ( USDP) ရဲ့ “စွမ်းအားရှင်ဇ”ရှိမှု၊ ဦးသိန်းစိန်စစ်တစ်ပိုင်းအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ရဲ့ တစ်ဖက်သတ်ဘက်လိုက်မှုတွေနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေကို အလေးထားတွက်ချက်ခဲ့လို့ ဒီလိုယူဆပြီးကောက်ချက်ချခဲ့တာပါ။
(၁) ဒါပေမယ့် ပြည်သူများက ဒီလို ညစ်ပတ်မှု/ကောက်ကျစ်မှုတွေ၊ မသမာမှုတွေကို ဖြတ်သန်းကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း “ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ”မှာ ပထမဆုံးအချက်အဖြစ် ထင်ထင်ရှားရှားသက်သေပြသခဲ့ပါပြီ။
(၂) ဒီအနိုင်ရရှိမှုက ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ (USDP) ကို မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပါ အထင်အရှားဖေါ်ပြ သက်သေခံ နေပါတယ်။
လစ်လပ်သွားတဲ့မဲဆန္ဒနယ် (၄၈) နေရာအားလုံးဟာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ (USDP)က အနိုင်ရထားခဲ့တဲ့ နေရာတွေဖြစ်တယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ (USDP) က ထိပ်သီးများ“၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၇ ရွေးကောက်ပွဲ” မှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေရာ(၄၈)နေရာက ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူ(၄၈)ဦး အနက်(၃၅) ဦးဟာ လက်ရှိအစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယား ထဲက အဓိက နေရာတွေကို ရယူထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ ၁ ဦး နဲ့ ဒုတိယသမ္မတ ၂ ဦး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၂၂ ဦး၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ၁ ဦး၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ၁ ဦး နဲ့ ဒုတိယဝန်ကြီး ၈ ဦး အဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
(၃) ဒါကြောင့် “၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ၇ ရွေးကောက်ပွဲ”မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ (USDP) က အနိုင်ရရှိခဲ့တာဟာ မတရားသဖြင့် အနိုင် ရရှိခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို “ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ”က တတိယအချက်အဖြစ် ဆက်လက်ဖေါ်ထုတ် သက်သေခံနေပါတယ်။
“ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ”အနိုင်ရရှိမှုဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ် အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် လွှတ်တော်ပြင်ပအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ NLD ကို “လွှတ်တော်တွင်း” ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ပြည်သူတွေကစွန့်စွန့်စားစားအနိုင်မဲတွေ ပေးခဲ့ခြင်း လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်တစ်ဆင့်၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရ ပြောမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေဘက်က တာဝန်ကျေခဲ့ပါပြီ။
ဒါကြောင့် NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းဦးစားပေးတာဝန်ကြီး သုံးရပ် (တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ) ကို လွှတ်တော်ထဲမှာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကိစ္စဟာ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
လွှတ်တော်ထဲမှာ NLD ရဲ့ ထိပ်တန်းဦးစားပေးတာဝန်ကြီး သုံးရပ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရမယ့်ကိစ္စကလည်း “ကျားမြှီးဆွဲရုံ တင်မကဘူး၊ ကျားကိုဂုတ်ခွစီးရမယ့်ကိစ္စ” မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရပြောမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်အသီးသီးထဲမှာ NLD ဟာ အနည်းစုဖြစ်မြဲဖြစ်နေပါတယ်။ လွှတ်တော်တွင်းတိုက်ပွဲတစ်ခုထဲနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပညာစွမ်းရည်သတ္တိ၊ ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ ဖြတ်သန်းကျော်လွှားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူများ၊ လွှတ်တော်ပြင်ပအင်အားစုများနဲ့ ပေါင်းစပ်ရပါလိမ့် မယ်။
ဦးဝင်းတင်ကတော့ “ လွှတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေးသက်သက်ပဲ ဆောင်ရွက်မယ့်ပါတီမျိုးမဟုတ်မဟုတ်ဘူး….လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်း ဆက်လက်ကိုင်စွဲသွားမယ်…၊လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးမှာ အခြေစိုက်ပြီး လွှတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေးကို လှုပ်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်” လို့တော့ပြောဖူးပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်အဆိုတစ်ခုကိုတင်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူ ကို အကျိုးမဲ့စေမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်အားလိုပါတယ်။ “ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ပါတီစွဲ၊ လူမျိုးစွဲ ကင်းရမယ်” လို့ ဘယ်သူက၊ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါစေ၊ လွှတ်တော်ထဲမဲခွဲကြတဲ့အခါမှာ အင်အားများတဲ့ပါတီကပဲ အနိုင်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လွှတ်တော် အသီးသီးမှာရှိတဲ့ စစ်သားအမတ် ၂၅% ဟာလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ(USDP) အတွက် ကိန်းသေပေါက်ရရှိထားတဲ့ကြိုတင်မဲ တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။
ဒါကြောင့်ဘယ်သူမဆို၊ ဘယ်ပါတီမဆို လွှတ်တော်ပြင်ပ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့အင်အား၊ ပြည်သူသတ္တိတွေနဲ့ ကင်းကွာနေမယ်၊ ကင်းမဲ့နေမယ်၊ အဆက်ဖြတ်ထားမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်သံသရာဝဲဂယက်မှာ ပက်လက်မျောနေပါလိမ့်မယ်။
“ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်း ၅ နှစ်ရွေ့ဆိုင်းပေးရတဲ့အောင်ပွဲ” နဲ့ “ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ”အနိုင်ရရှိမှုတို့ ဟာ လွှတ်တော်ပြင်ပ ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
– ဦးဝင်းတင် နဲ့ မေးခွန်းများ၊ ပြည်ထောင်စု၊ လူထုရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန် နဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲသို့ သွားရာလမ်း ( မိုးမခ ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ )
– (ဓာတ်ပုံ – ၀ိုင်ပီအိုင်၊ Yangon Press International, ဧပြီ ၁၊ ကော့မှူး၊ ပြည်သူတို့ အင်န်အယ်ဒီအောင်ပွဲခံနေသည့် မြင်ကွင်း)
2 Responses to Tu Maung Nyo – ပြည်သူတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အောင်ပွဲ
zaw on April 3, 2012 at 1:32 pm
we (population of Myanmar) believe in AMAY SU and NLD. Qualification is more importance than quality. In Democracy, little difference parties’ senators must be in
parliaments. AMAY SU truly know about Democracy. Sure in within two years,
Myanmar will be golden land again. Please follow her idea.
(DEMOCRACY BIRD CAN FLY BY TWO WINS~~~~~~~~~~)
(To All population, one of the idea of democracy is (freedom of speak, freedom of write,
freedom of right) please go ahead we support NLD.
jasmine on April 3, 2012 at 11:28 pm
congratulation to MOM SU of u r actual winning . careful of u r health and everything.
all of military are zombie. be care of they.GOD BLESS U for everything .